भुटेको मकै : पोषिलो र स्वादिलो खाजा | सुदुरपश्चिम खबर
साँधेको गुन्द्रुक र भुटेको मकै चपाउनुको स्वाद कस्तो हुन्छ ? तात्तातो चिया सुरुप्प पार्दै भुटेको मकै चपाउँदाको मिठास कस्तो हुन्छ ?
बाहिरको पपकर्न भन्दा घरमै भुटेको मकै स्वस्थकर हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् । मकैमा धेरै तेल वा घिउ प्रयोग गर्न नहुने उनीहरुको सल्लाह छ । मकैमा लसुन र मरिचको धुलो हालेर खाँदा मुटु बलियो हुने बताइन्छ ।
भुटेको मकैमा फाइबर हुन्छ जसले शरीरभित्र ब्लड सुगरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । जब शरीरमा पर्याप्त फाइबर हुन्छ, यसले ब्लड सुगर र इन्सुलिनको स्तरलाई नियमित गर्छ । त्यसैले मधुमेहका रोगीहरुलाई भुटेको मकै खाने सल्लाह दिइन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)